Somaliland diyaar umma ah in ay khaatumo in ay qanciso ! Waa Qalinkii Cabdalle Ayaanle Cartan. Ayaanle
Sunday June 18, 2017 - 12:50:18 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
Somaliland diyaar umma ah in ay khaatumo qanciso ! Sannadkii hore waxaan Ku baahiyay halkan qoraal, ku saabsanaa Somaliland iyo Khaatumo. Wuxuu ahaa nuxurkiisu Somaliland waxay haystaa fursaddii ugu wacanayd, laakiin hadda diyaar umma ah in ay qanciso khaatumo. Arrinkaasi sannad buu qaatay oo kasoo wareegtay walina Somaliland diyaar umma noqon diyaar garawgaasina kamma muuqdo. Waxaan taaganahay halkii sannad ka hor iyo siddaan u sheegay. Waxaa jiray dad badan oo maalinkaa ii arrkayay qof iska hadlaya,
maantoo Cali Hargaysa soo dagayna maxay ii arkayaan oo aan wali halkii ka taaganahay arrinkaas. Mar labaad aan ku celiyo iminka waa fursaddii ugu wacanayd ee Somaliland haysato in ay khaatumo la heshiiso, laakiin nasiib darro diyaar umma nihin mana muuqato in aynnu qancinkaro. Waxaad is waydiinaysaa sowtan Hargaysa waraaqaha lugu kala saxiixday ee lawada fadhiyo, ee habalyda iyo bogaadintu ku qorantahay meel walba, ninkani isagu sidduu ka doonayaa. Waraaqadaba haddaan lafteeda u tagno waxaa ku qoran. Nabad kuwada noolaansho. Wadajirkeena.
Wax wada lahaansho. Meel uga soo wada jeesiga cadawgeena. Horumarkeena. Intaasiba waa mihiim in la kala qortaa oo lugu heshiiyaa, laakiin in ay fulaan baa ka sii muhiimsan oo aan wax walba ka jeclahay. Intaas raggii kasoo shaqeeyay way ku mahdsanyihiin kumanaan jeer. Gaar ahaan Faysal Cali Waraabe oo arrinkaa aad ugu guntaday oo bogaadin iyo sharfba aynu ugu haynno. Haddaba dhanka khaatumo iyo hogaankoodu maanta waxay sameeyeen geesinimo tii ugu waynayd. Oo muddo badan baa lagu lahaa
waxabaynu wada leenahay oo saxaafadda loo marinayay. Haddaba maanta way kula qaateen in aynnu wax wada leenahay oo miiska in aad soo dhigto ayay sugayaan wixii la wada lahaa. Cali aniga iilama muuqdo nin inta isaga xil lasiiyo, jeebabkana abuu bidaar looga buuxiyo iska daaqaya uun. Taasi innagana Somaliland ahaan wax ay inna taraysaa ma jirto, moddo ayaynu sidaa wax usoo wadnay. Cali laftiisuna maaha wax dadkiisu ka qaadanayaan ee wuxuu noqonayaa nin reer Hargaysa ah khaatumo iyo halkuu ka yimina hawshooda ayay iska wadanayaan. Haddaba maxaa loobaahanyahay in heshiiskan laga fa'iidaysto khaatumo ay Somaliland si aan riwaayad ahayn ula heshiiso. Waa ta is waydiinta leh, waa ta aan ku leeyahay Somaliland diyaar umma ah hadda katana muuqato. Khaatumo waxay doonaysaa Somaliland cusub oo hadda saamigeeda meel loosaaro.
Saamiga ay doonayso ayaa is waydiin leh . Kay doonaysaa waa in si toos ah ay hogaanka dalka qaybteeda u heshaa, hadday xisbiyo tahay, hadday golayaal tahay, hadday wasaaraddo tahay, hadday ururo kale tahay, hadday ciiddan tahay iyo hadday madaxwayne noqotaba. Oo intaasoo dhan in ay doonaana xaqbay u leeyihiin. Sidoo kale in dastuurka lafuro iyo nidaamka lugu shaqeeyo oo dhan
wax kabadal loogu sameeyo. Sababtoo ah waxay u yaqaanaan in reer koodda mid la mid ahi waxn ku shaqaysto oo uu samaystay. Haddaba intaasoo dhan Somalilandta maanta ka jawaabaysaa waatee? Jawaab iska daayoo ta hawsheedii ku jirtaa amma diyaargawgeeddii watee. Waxaan soo jeedin lahaa labbo tallo mid kood. Horta in shir qaran laysugu yimaado arrinkaasna reer Somaliland kawada fadhiistaan. Oo ay labbo xaallo mid kood yeelaan. In iminka ay khaatumo hawsheeda meel mariyaan intaan dooraahaduba dhicin. Iyo in marka doorashadu dhacdo hawsha khaatumo dhan walba in saamigooda loo meel mariyo, doonis walba oo ay leeyihiina jawaabteeda hadda la sii meel dhigo.
Facebook: Cabdalle Ayaanle Cartan. Ayaanle1331@hotmail.com Tel. +4915217698914